ပြင်ဆင်မှုမရှိ၊ နည်းဗျူဟာမရှိ၊ ခြေစွမ်းမရှိ၊ စိတ်ဓာတ်မရှိသော မြန်မာဘောလုံးအသင်း အာဆီယံပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျောက် အဆိုးရွားဆုံးရလဒ်ဖြင့် ရှုံးနိမ့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ပြင်ဆင်မှုမရှိ၊ နည်းဗျူဟာမရှိ၊ ခြေစွမ်းမရှိ၊ စိတ်ဓာတ်မရှိသော မြန်မာဘောလုံးအသင်း အာဆီယံပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျောက် အဆိုးရွားဆုံးရလဒ်ဖြင့် ရှုံးနိမ့်
ပြင်ဆင်မှုမရှိ၊ နည်းဗျူဟာမရှိ၊ ခြေစွမ်းမရှိ၊ စိတ်ဓာတ်မရှိသော မြန်မာဘောလုံးအသင်း အာဆီယံပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျောက် အဆိုးရွားဆုံးရလဒ်ဖြင့် ရှုံးနိမ့်
Posted by Bayote on Dec 3, 2010 in Myanma News, News |9comments
၂၀၁၀ အာဆီယံဆူဇူကီးဖလားပြိုင်ပွဲ အုပ်စု(ခ)ရဲ့ ပွဲစဉ်တွေကို ဒီဇင်ဘာလ(၂)ရက်နေ့ညနေပိုင်းက ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်းမြို့မှာစတင်ကျင်းပခဲ့ရာမှာ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်းဟာ ဗီယက်နမ်အသင်းကို (၇-၁)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး၊ စင်ကာပူနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်အသင်းတို့ရဲ့ ပွဲစဉ်ကတော့ (၁-၁)ဂိုးသရေရလဒ်နဲ့ ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ မကြာခင်ကကျင်းပပြီးစီးသွားတဲ့ ၂၀၁၀အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာအားကစားအဖွဲ့ဟာ ရွှေတံဆိပ်(၂)ခုအပါအ၀င် ဆုတံဆိပ်ပေါင်း (၁၀)ခု ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပြီး၊ အာဆီယံ အားကစားအင်အားကြီး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဗီယက်နမ်ရဲ့ အထက်မှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာ တခြားအားကစားနည်းတွေကြောင့် မြန်မာအားကစားလောကရဲ့ အနေအထားဟာ ပြန်လည်ဦးမော့လာခဲ့ပေမယ့် တစ်ချိန်က အာရှအဆင့်မှာ ထိပ်တန်းအသင်းတစ်သင်းအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ မြန်မာဘောလုံးအသင်းကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ အရှေ့တောင်အာရှမှာတောင် ခြေစွမ်းအဆင့်အတန်းမမီတဲ့ အနေအထားကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။﻿
မြန်မာဘောလုံးလောကကို အပျော်တမ်းကနေ ပရိုစနစ်ကိုကူးပြောင်းခဲ့တဲ့ MNL ပြိုင်ပွဲကြောင့် မြန် မာ့လက်ရွေးစင်အသင်းအပေါ် မျှော်လင့်ချက် မြင့်မြင့်မားမားထားရှိခဲ့တဲ့ မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့ မျော်လင့်ချက်တွေဟာ ၂၀၁၀အာဆီယံဆူဇူကီးဖလားပြိုင်ပွဲ၊ အုပ်စု (ခ)ရဲ့ အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ ဗီယက်နမ်အသင်းကို ပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျောက် အဆိုးရွားဆုံးရလဒ်နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတဲ့ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်းရဲ့ရလဒ်ကြောင့် ရေစုန်မျောခဲ့ရပါတယ်။
မြန်မာအသင်းဟာ အိမ်ရှင်ဗီယက်နမ်ကို ပွဲအစ မိနစ်အနည်းငယ်မှာ သူတင်ကိုယ်တင်ကစားနိုင်ခဲ့တာကလွဲလို့ ကျန်ပွဲချိန်တစ်လျောက်လုံး မယှဉ်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာပါ။ ဗီယက်နမ်အသင်းဟာ မြန်မာအသင်းကို တစ်ဦးချင်းရော အသင်းလိုက်မှာပါ အသာရခဲ့တဲ့အပြင် နည်းစနစ်၊ နည်းဗျူဟာပိုင်းနဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းမှာလည်း လွှမ်းမိုးကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာအသင်းကတော့ ဒီပွဲစဉ်မှာ အပေးအယူအချိတ်အဆက် လုံးဝမမိခဲ့ဘဲ ဗီယက်နမ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကို ကြုံ သလို ဖျက်ထုတ်ကစားခဲ့ရပါတယ်။ မြန်မာအသင်းကွင်းလယ်ဟာ တိုက်စစ်ကိုမပံ့ပိုးနိုင်ရုံသာမက ခံစစ်အတွက်လည်း အကူအညီမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာအသင်းရဲ့ တောင်ပံခံစစ်တွေကနေ ဗီယက်နမ်အသင်းက စိတ်ကြိုက် တိုက်စစ်ဆင်ထိုးဖောက်ခဲ့ပြီး ဒုတိယပိုင်းမှာ ဂိုးတွေဆက်တိုက် သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးတည်းသာထားကစားတဲ့ မြန်မာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုလည်း ဗီယက်နမ်နောက်ခံလူတွေ က အလွယ်တကူ ထိန်းချုပ်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမပိုင်းပွဲချိန် (၁၃)မိနစ်မှာ ဗီယက်နမ်အသင်းက ပထမဂိုးစတင်သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ ဒီဂိုးဟာ ဗီယက်နမ်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ကို မြန်မာနောက်ခံလူတွေ မထိန်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့် တိုက်စစ်မှူးငုယင်အန်ဒက်က အနီးကပ် ပိတ်သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲချိန် (၁၅)မိနစ်မှာ အောင်မျိုးသန့်ရဲ့ ပေးပို့မှုကနေ ဗီယက်နမ်နောက် ခံလူ (၂)ယောက် လိုက်ဖျက်နေတဲ့ကြားက အောင်ကျော်မိုးဟာ မြန်မာအသင်းအတွက် ချေပဂိုးပြန်သွင်း နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဗီယက်နမ်အသင်းကသာ ခြေစွမ်းအသာနဲ့ ဆက်လက်ဖိကစားခဲ့ပြီး မြန်မာအသင်းကတော့ အပေးအယူအချိတ်အဆက်တွေ လွဲချော်နေပါတယ်။ ပွဲချိန်(၃၀)မိနစ်မှာ ဗီယက်နမ်အသင်း ခေါင်းဆောင် ငုယင်မင်ဖောင်က မြန်မာပယ်နယ်တီ ဧရိယာအစပ်မှာရရှိတဲ့ ဖရီးကစ်ကို တိုက်ရိုက်ကန်သွင်း နိုင်ခဲ့တာကြောင့် ဗီယက်နမ်တို့ဒုတိယဂိုးထပ်မံရရှိကာ ပထမပိုင်းအပြီး(၂-၁)ဂိုးနဲ့ ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်းမှာ မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ မျိုးမင်းထွန်းအစား ကျော်ကိုကိုကို လူစားထည့်သွင်းကစားခဲ့ပေမယ့် ကစားပုံတက်မလာခဲ့ဘဲပွဲချိန်(၅၁)မိနစ်မှာ တတိယဂိုး ထပ်မံပေးခဲ့ရပါတယ်။ ပွဲချိန်မိနစ်(၆၀)မှာ တော့ မြန်မာအသင်းနည်းပြဦးတင်မြင့်အောင်က ထွန်း ထွန်းဝင်းနဲ့ အောင်မျိုးသန့်တို့ကိုထုတ်ပြီး မိုင်းအိုက် နိုင်၊ ကျော်ခိုင်ဝင်းတို့ကို လူစားလဲခဲ့ပြန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဗီယက်နမ်အသင်းကသာ ဂိုးတွေထပ်မံသွင်းယူ ခဲ့ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်အတွက် စတုတ္ထဂိုးကို ပွဲချိန်(၆၆) မိနစ်မှာ ငုယင်အန်းဒက်က သွင်းယူခဲ့ပြီး ပွဲချိန်(၇၄) နဲ့(၈၃)တို့မှာ ငုယင်ထရောင်ဟောင်၊ နာကျင်အချိန်ပို မှာ ငုယင်ဘူဖောင်တို့က ဂိုးတွေထပ်မံသွင်းယူခဲ့တာ ကြောင့် မြန်မာအသင်းဟာ ဗီယက်နမ်အသင်းကို (၇-၁)ဂိုးနဲ့ ဂိုးပြတ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ ၂၀၁၀ အာဆီယံဆူဇူကီးဖလားအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု အလွန်အားနည်းခဲ့တဲ့အပြင် ပြိုင်ပွဲအကြိုလုံလောက်တဲ့ခြေစမ်းပွဲတွေ စီစဉ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေဟာ အခုလိုမျိုးဆိုးရွားတဲ့ ရလဒ်နဲ့ကြုံတွေ့ဖို့ ဖန်တီးပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
“ပြိုင်ပွဲမှာ ကလပ်အသင်းတွေက ကျပ်ငွေသိန်းပေါင်းသောင်းချီပြီး အသုံးပြုနေချိန်မှာ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်တော့ လုံလောက်တဲ့ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုမျိုးမရှိဘူး ဖြစ်နေတယ်။ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက် နိုင်ငံခြားသားနည်းပြ၊ ဒါမှမဟုတ်နည်းစနစ်ဒါရိုက်တာ ကြိုတင်ငှားရမ်းမှု၊ နိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲတွေ လုံလုံလောက်လောက်ကစားခွင့်ရအောင် စီစဉ်မှုစတာတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးသုံးစွဲမှုမရှိခဲ့ဘူး။ အစစအရာရာ ပြင်ဆင်မှုအားနည်းခဲ့တာကြောင့် ဒီရလဒ်ထွက်လာတာ မဆန်းပါဘူး’ ကိုကျော်ဇောလင်း(အမှုဆောင်အယ်ဒီတာ) First Eleven Sport Journal
“ဗီယက်နမ်အသင်းက Performance တော်တော် ကောင်းပါတယ်။ သူတို့ပရိသတ်တွေရဲ့ ကွင်းလုံးပြည့်အားပေးတဲ့ Pressure တွေကြောင့်လည်း ကျွန်တော့်ကစားသမားတွေ ထင်သလောက် မကစားနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ ဘောလုံးအသင်း တစ်သင်းမှာနှစ်ဦး၊ သုံးဦးလောက်က အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းနေရင် ဒီလို မျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ (၂)ပွဲကစားဖို့ ကျန်သေးတဲ့အတွက် အုပ်စု တက်ဖို့ အခွင့်အရေးတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။” ဦးတင်မြင့်အောင် (နည်းပြချုပ်-မြန်မာအသင်း)
“ကျွန်တော့်အမြင်တော့ မျိုးဆက်သစ်တွေနဲ့ လက်ရွေးစင် အသင်းကို ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။ တစ်ခါလာလည်း ဒီလူ တွေနဲ့ရလဒ်မကောင်းရင် ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ရတော့မှာပါ။ ကျွန် တော်ဒီလောက်ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။” ဦးခင်မောင်ကြိုင်(အုပ်ချုပ်သူ-မြန်မာအသင်း)
“ကျွန်တော့်ကစားသမားတွေ အခုပွဲကစားပုံကောင်းမွန်ပြီး အသင်းကစားကွက်နဲ့ အံဝင်အောင်ကစားနိုင်လို့ ဂိုးတွေအများ ကြီးရလိုက်တာပါ။ ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမယ့် မြန်မာအသင်းဟာ အသင်းကောင်းတစ်သင်းပါ။ မြန်မာအသင်းရဲ့ အားနည်းချက်က တော့ လူကပ်ကစားရာမှာ အားနည်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်တို့တောင်ပံတွေကနေ ကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားပြီး ကစားနိုင်ခဲ့တာပါ။ ကွင်းလယ်မှာလည်း စုစည်းမှုမရှိလို့ Space တွေအများကြီးပေါ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ ဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် မြန်မာအသင်းဟာ အဆင့်ရှိတဲ့ အသင်းတစ်သင်းပါ။” မစ္စတာကယ်လစ္စတို (နည်းပြချုပ်-ဗီယက်နမ်အသင်း)
﻿Source : Eleven News မှ ရင်နာနာ နှင့် အများသိရန် ကူးယူ တင်ပြလိုက်ရခြင်းပါဘဲ
ဦးခင်မောင်ကြိုင် အမြင်မှန်ရနေပြီ။ ဇော်ဇော်ကတော့ မိုက်တုန်းပဲ။
ဘောလုံးသမား…. ဖြစ်လိုခြင်းသည်… custom တွင် အလွယ်တကူ အလုပ်လုပ်လို၍ဖြစ်ပါသည်..
ပွဲ….တိုင်း… ရူံးနိမ့်ခြင်းသည်…. တစ်ဖက်အသင်းအား စာနာခြင်းဖြစ်သည်….
စင်္ကာပူပေါ်လီ အငြိမ့်ထဲက သီချင်းလေးပါ…
ရှက်လိုက်တာ :shock: ..ဗီယက်နမ် 7: မြန်မာ 1 တဲ့ ရှုံးကြွေးဆပ်ဖို့ နေနေသာသာ ရာဇ၀င် တွင်အောင်တောင် ၇ ဂိုး သွင်းခံခဲ့ ရတယ်…နောက်ဆုံးတော့ မြန်မာဟာ မြန်မာပါဘဲ… အမှတ်မရှိ အားပေးမိတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ စိတ်တိုတယ်
ဘာကြောင့်ရှုံးတာလည်းဆိုတော့ မြန်မာ့ဘောလုံးသမားတွေမှာ အယူမှားတဲ့ အလွဲ အတွေးလေးတွေရှိနေလို့….နိုင်ငံ့အသင်းမှာ အင်တိုက်အားလိုက်ကစားလိုက်လို့ တစ်ခုခုအနာတရာဖြစ်သွားရင် သွားပီလေ ကလပ်အသင်းမှာ သုံးလို့မရတော့ရင် လစာကောင်းကောင်းမရတော့ဘူး…မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ဆိုတာကို လုံးဝမေ့သွားသလိုပဲ နိုင်ငံခြားသွားဖို့အရေးခံရရင် ဒေါ်လာတော့ရမှာပဲ ရတာလေးပဲယူပြီး အိမ်ပြန်လာ ယုံပဲမဟုတ်လား…. ခံယူချက်ချင်းက နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်က ကစားသမားတွေနဲ့တအားကွာတယ်….အဲဒီက ကစားသမားတွေ ဆိုရင် နိုင်ငံပွဲမှားအားထည့်ကစားတယ် အဲဒီကနေမှ အခွင့်အလမ်းပိုထွက်တယ် နေ နိုင်ငံခြားကလပ်တွေက ကိုယ့်အရည်အချင်းကိုသဘောကျရင် ၀ယ်လိုက်တယ် မဟုတ်လား အ ခုတော့ ကျွဲခြေရာခွက်ထဲမှာပဲ သာယာနေကြ တယ်….
အခုကန်ဗီယက်နမ်နဲ့ကန်တဲ့ပွဲမှာ ပရိယာယ်တစ်ခုကြောင့် အရှုံးပေးပါတယ် ဆိုရင်တောင်မှာ ခုလောက်ထိတော့ မလုပ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ် အခုလိုလုပ် လိုက်တော့ သန်း(၆၀)လောက်ရှိတဲ့ ပြည်သူတွေကို စော်ကားလိုက်သလို ဖြစ်နေပါတယ်…မနိုင်မှန်းသိပေမဲ့ အင်တိုက်အားတိုက်အားပေးနေပေမဲ့ ကစားသမားတွေက အင်တိုက်အားတိုက်မကစားခဲ့ကြဘူး….စိတ်လုံးဝမပါ သလို ခံစားရပါတယ်…နိုင်ငံတကာပွဲဆိုတာ အချိန်သတ်မှပေးထားတဲ့ အစီအမံ ရှိပြီးသား ပါ…အိမ်တစ်အိမ်လိုပေါ့…စားခါနီးကျမှ တွေ့ရာကောက်ချက်တဲ့ အိမ်နဲ့ နောက်နေ့မှာစားဖို့ ကြိုတင်စီထားတဲ့အိမ်က အစားအသောက် ကွာသလိုပေါ့… ဒါလည်းစားသောက်တဲ့သူတွေသိပါတယ်….သိရက်သားနဲ့လုပ်နေမယ်ဆိုရင် တော့ အဲဒီလိုဖြစ်အောင်စီမံတဲ့သူတွေမှာ တာဝန်ပိုရှိတယ်လို့မထင်မိဘူးလား… နောက်ပြီးတော့….ဦးဇော်ဇော်အနေနဲ့ မြန်မာ့ဘောလုံးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာ…အစပိုင်းမှာ စေတနာအမှန်ရှိသလိုဖြစ်နေခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ အတ္တနည်းနည်းများနေပါတယ်…ကိုယ်ကျိုးစီးပွားတစ်ခုတည်း အတွက်နဲ့ မြန်မာ့ဘောလုံးကို ထိုးကျွေးသလိုဖြစ်နေပါတယ်….လိုအပ်သလို ရွှေ့လို့ရနေပါတယ်…ဒါပေမဲ့ သန်း(၆၀)သောပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကို တစ်ချက် လေးလောက်တော့လှည့်ကြည့်သင့်ပါတယ်….
မြန်မာ့ဘောလုံးတိုးတက်အောင် ဦးဇော်ဇော်မှမလုပ်ရင်ဘယ်သူမှလုပ်မဲ့တဲ့သူ မရှိတော့ဘူး မရှိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အယူအဆကပဲ မှန်နေသလိုလိုဖြစ်နေပီ…ဒါတွေဟာ နိုင်ငံတော်က ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုရမဲ့ကိစ္စမဟုတ်လား…ပြည်သူတွေအကျိုး နိုင်ငံ့အကျိုးအတွက်ပဲမဟုတ်လား….ကုန်ကျသင့်တဲ့ငွေကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာကနေ သုံးစွဲပြီး မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်….သယံဇာတပေါကြွယ်ဝ တဲ့နိုင်ငံမှာနေပြီး ဘာလုပ်လုပ် ပုဂ္ဂလိကကိုပဲလွှဲနေမယ်ဆိုရင်…မလွယ်ဘူး.. အဲဒီမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခွန်းကိုအမှတ်ရမိတယ်…. အဲဒီအချိန်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကားပျက်လို့ ရုံးတော်ကိုခြေကျင်လျှောက် သွားရတဲ့အချိန်လေ…. တပည့်ဖြစ်သူက အသိသူဌေး ကူညီသူတွေဆီကို ဖုန်းဆက်လိုက်ရင် ကားလာပို့ပြီးသွားလို့ရကြောင်းပြောတော့ (စကားလုံးအတိအကျမဟုတ်ပေမဲ့ အဲဒီသဘောသက်ရောက်ပါတယ်) ဗိုလ်ချုပ်က အဲဒီစီးပွားရေးသမားတွေကိုအကူအညီတောင်းရင် သူတို့တွေကိုမျက်နှာထောက် နေရတာနဲ့ ကိုယ်လုပ်ရမဲ့အလုပ်ကိုထိခိုက်စေတယ် မျက်နှာငဲ့နေရတာနဲ့ မှန်ကန် တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်လို့မရနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်တဲ့စကားတွေကို ပြန်ပြောခဲ့တာမှတ်သားရပါတယ်….ဒီခေတ်နဲ့တော့တစ်ခြားစီပါ…အခုတော့ ဘောလုံးကိုတည်ပြီး ရတာနဲ့အကုန်စားနေတာကတော့ မလွယ်ဘူး…ရှေ့ဆက်ပြီး မြန်မာ့ဘောလုံးလောကတိုးတက်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ခြေ ဖောင်ဒေးရှင်းကနေစပြီး အားလုံးပြင်ဆင်သင့်ပါပြီ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ နဲ့ဆိုရင် ဘောလုံးသမားလေးတွေအများကြီးရနိုင်ပါတယ်….
နောက် အဲလို ပဲကန် နေအုန်း မှာဆို ရင် မြန်မာ နာမည်နဲ့ မ ကန် နဲ့။ Sရှက် လုံးဝ မ ရှိတဲ့ ကောင် တွေ။
ပြည်တွင်း တုန်း က ကို့ လူအချင်းချင်း ဆိုတော့ မ သိသာ ဘူး။ ခု တော့ကွာလိုက်တာကွာ။ ကလပ် အသင်းက လခ လေး ကောင်းကောင်း ရ၊ ငွေ ယား လေး ရှိ တေ…ာ့၊ Night Clubတက် ၊Massage သွား ။ ဟာသ တောင် ရှိ သေး တယ် ” ဪ Night Club တို့ Massageတို့ ဆိုတာ ဘောလုံး အ သင်း တွေ ကိုး” ဆို တာ။ ဟုတ် မှာ ပေါ့ အဲ ဒီနေ ရာ တွေမှာ ဒီကောင် တွေပဲ ပြည့် နေတာ ကိုး။
နောက် ပွဲ တွေ လဲ မ ထင် လှ ပါ ဘူး ။ ထုံး စံ အ တိုင်း ရန် ဖြစ် ပြီး ပြန်လာရ အုန်း မှာပဲ။
လွန်ခဲ့ တဲ့ ၃ ၊၄ နစ် က မြန်မာ တွေ ရှုံး တာ ကြည့် ပြီး အိမ် နားက အဖိုး ကြီး တစ်ယောက် သေ သွားဖူး တယ်။ ဒီ အဖိုးကြီး ကံကောင်းသွားတယ် ခု လို အားပါးတရ ရှုံးတာ မ မြင် လိုက်လို့။
P.S – ဗီယက်နမ် အသင်းသည် မိုင်ဒင်းကွင်းတွင် သွင်းရသည်ကို အားမရ၍ ဟိုတယ်ထိ လိုက်လံ သွင်းယူရန် စိုင်းပြင် နေကြသည်။
ကျွန်တော့် ကစားသမားတွေရဲ့ ကစားပုံအပေါ် ယုံကြည်မှု အပြည့် ရှိပါတယ်။ မြန်မာနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့ အသင်းတိုင်းဟာ ချောင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ((ဦးတင်မြင့်အောင် မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် နည်းပြချုပ် ))
အဲဒီ ဦးတင်မြင့်အောင် ဆိုတာ ဘယ် ကလူရွှင်တော် လဲ။ တော်တော် နောက် တတ် တယ်နော်။ ဘာကို မ ချောင် မှာ လဲ မသိ။
မြန်မာအသင့်က ကကစားသမားတွေက နိုင်ငံတကာအဆင့်မီပါတယ်။
ခင်မောင်ထွန်းဆို ဆံပင်အရှည်လေးကို အလှပြင်ထားတာ ပရီမီးယားလိဂ်ကကောင်တွေအတိုင်းပါဘဲ။
ဂိုးမသွင်းနိုင်တာကလဲ ပရီးမီးယားလိဂ် အောက်တန်းဆင်းရမယ့် အသင်းကအတိုင်းပါဘဲ။
မြန်မာနဲ့နိုင်ငံခြားပွဲတွေနဲ့ ကန်တိုင်းမြန်မာတွေကို အားပေးလိုက်ရတာ။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာတွေက တိုးတက်မူမရှိလာပါဘူး။